एकाएक विवादमा तानिइन् केकी ? किन - Gandak News
एकाएक विवादमा तानिइन् केकी ? किन
गण्डक न्यूज द्वारा १५ श्रावण २०७६, बुधबार १५:२८ मा प्रकाशित
नायिका केकी अधिकारी एकाएक विवादमा तानिएकी छिन् । बौद्धिक नायिकाको परिचय बनाएकी केकीले एक गीतको भिडियो लिंक शेयर गरेका कारण विवादमा तानिएकी हुन् । यसबारेमा केकीले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएकी छैनिन् ।
गायक आर्जन पाण्डेले ‘घाँटीभन्दा तल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरे । यो गीतको खासै चर्चा पनि भएन । तर, गीतलाई केकी अधिकारीले शेयर गरेपछि भने गीत पनि चर्चा र विवादमा रह्यो ।
रोमान्टिक शैलीको यो गीतमा प्रयोग गरिएका शब्दलाई लिएर विवाद भएको हो । तर, गायक आर्जन पाण्डेको भन्दा बढी विरोध केकी र रीमा विश्वकर्माको भएको छ । खासगरी केकीले प्रायः महिला हिंसाका बारेमा सधै बोल्ने गर्छिन् । यसकारण पनि केकी सबैको तारो बनेकी हुन् ।
त्यसो त केकी यसअघि एनआइसी एसियाको विज्ञापनमा अभिनय गरेका कारण पनि विवादमा परेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा महिला हिंसालाई बल पु–याउने भिडियोमा अभिनय भन्दै उनको विरोध भएको थियो । अहिले उक्त विज्ञापन नयाँ तरिकाले प्रसारण हुन थालेको छ ।
आर्जन पाण्डेले बजारमा ल्याएको गीतमा केकी अधिकारीको त कुनै भूमिका छैन । तर उनले यो गीत शेयर गरेकी थिइन् । केकीले शेयर गरेपछि गीतको थप चर्चा हुन थाल्यो । गीतका शब्दहरुमा महिलालाई घाँटीभन्दा तल राम्री भएको भनिएको छ । यसले महिलाको भद्दा मजाक गराएको महिला अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि आर्जनका भिडियोमा केकी अधिकारीले अभिनय गरेको हुन्थिन् । यी दुई प्रेमसम्बन्धमा रहेको चर्चा समेत चल्न थालेको थियो । शायद केकीले साथीको गीत भएका कारण गीत शेयर गरेकी थिइन् । तर, त्यही शेयरले उनलाई विवादमा ल्याइदियो ।